Qarax ka dhacay Bar laga ilaaliyo Madaxtooyada Somalia ee Magaalada Muqdisho & Wararkii ugu danbeeyay ... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Qarax ka dhacay Bar laga ilaaliyo Madaxtooyada Somalia ee Magaalada Muqdisho & Wararkii ugu danbeeyay ... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa Qarax loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo is-miidaamin ahaa, kaasoo ka dhacay koontoroolka Sayidka ee magaalada Muqdisho oo laga ilaaliyo xarunta Madaxtoyada Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in Gaariga qaraxa siday ayaa isku qarxiyey Koontoroolka Sayidka ee lagu hubiyo Gawaarida u gudbaya dhinaca madaxtooyada, waxaana halkaasi ku sugnaa baabuur fara badanoo qaarkood uu dab qabsaday; iyadoo goobta ay gaareeny gaadiidka gurmadka.
Muuqaaladii ugu horeeyay ee qaraxa ayaa muujinaya Gaadiid badan oo ku burburay, waxaana wararkii ugu horeeyay ay sheegayaan in 4 qof ay ku dhinteen qaraxa, dhaawacuna ka badan yahay 15 kale.
Previous articleDEGDEG: Telefishanka Iran oo shaaciyey in Askar Mareykan ah lagu dilay Weerarkii saldhigga ku yaalla Ciraaq…
Next articleAyatollah Cali Khomeyni: “Dharbaaxo ayaa ku dhacday Mareykanka, laakiin Aargoosiga Gen. Suleymani waa weli…”